दुर्गादेबीले लिइन् ६१ वर्षको उमेरमा नागरिकता |
दुर्गादेबीले लिइन् ६१ वर्षको उमेरमा नागरिकता
प्रकाशित मिति :2016-03-23 13:50:56
डडेल्धुरा। ६१ वर्षीया दुर्गादेबी सार्की नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा गइन्। अनि कर्मचारी र अन्य सेवाग्राहीले समेत एकै स्वरमा सोधे “६१ वर्षको उमेरमा नागरिकता? अहिलेसम्म कही पनि चाहिएन? डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका ८ बकण्डेकीमा वि सं. २०११ सालमा जन्मिएकी दुर्गादेवी सार्कीलाई उमेर ६१ वर्ष पुग्दासम्म कही कतै नेपाली नागरिकता चाहिएन। १६ वर्ष कै उमेरमा बनाउन मिल्ने नागरिकता ६१ वर्ष कट्नै लाग्दा आवश्यक परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा पुगिन्।
पुरा जिवन घरायसी काममा बिताएकी सार्की भन्छिन्,’मलाई नागरिकताको आवश्यकता कहिल्यै परेन, छोरा छोरीहरूको नागरिकता बनाउन वुवाको नागरिकता भएपछि पुगिहाल्यो।’
आफ्नो नागरिकता बनाउने कुरा गरेपनि श्रीमानले के चाहिन्छ भनी चासो नदिएपछि आफूले पनि छोडिदिएको उनको भनाई छ।
उनका तीन छोरा मध्येका एक नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्। उनले प्रहरीमा भर्ती हुँदा वुवाकै नागरिकता प्रयोग गरे। तीन छोरा र एक छोरीकी आमा सार्कीलाई उमेर ढल्किसक्दा भने आज नागरिकताको महशुस भएको हो। उनले छरछिमेकीमा रहेका ६० वर्ष कटेका आफ्ना दामलले सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको बृद्ध भत्ता पाईरहेको देखिन् र आफूले पनि भत्ता बुझ्न चाहिन्। तर, भत्ताका लागि चाहिने नागरिकता भने उनीसँग थिएन। नागरिकता भएपछि मात्रै भत्ता पाइने कुरा सुनेपछि उनी पनि आफ्नो नागरिकता बनाउन कस्सिएकी हुन्।
तरपनि उनकाश्रीमानले उनको नागरिकता बनाइदिने बारे अझैँ पनि आनाकानी गरिरहे। पारिवारिक अवस्थाबारे बुझ्दा बाहिरी रुपमा श्रीमानले नागरिकता बनाइदिन नचाहेको कारण केही देखिदैनथ्यो। श्रीमानले पनि बृद्ध भत्ता पाएका छैनन। उनको उमेर नागरिकतामा कम परेपछि बृद्ध भत्ताका लागि तोकिएको उमेर नपुगेकाले उनले भत्ता नपाएका हुन्।
उनले जातिय विभेद उन्मूलनका लागि वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियानको सहयोगमा श्रीमान सहित जिल्ला प्रशासनमा पुगिन र आवश्यक प्रक्रिया सहित नागरिकता बनाएकी हुन्।